Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Mpitsidika amerikana: Tsara i Hawaii, COVID na tsy misy COVID!
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny 81% amin'ny fahatongavan'i Etazonia dia manome lanja ny dia any Hawaii ho tsara indrindra amin'ny fitsapan-kevitra momba ny fahafaham-po amin'ny mpitsidika COVID-19.
Nandritra ny volana oktobra 2021, ny fandaharan'asan'ny Safe Travels any Hawaii dia namela ny ankamaroan'ny mpandeha tonga avy any ivelan'ny fanjakana mba handalo ny fanagadrana tena 10 andro tsy maintsy atao raha toa ka vita vaksiny tanteraka tany Etazonia izy ireo na nisy valin'ny fitsapana COVID-19 NAAT ratsy azo itokisana. Mpiara-miasa amin'ny fitsapana.
Ny mpitsidika miverimberina dia azo inoana fa vita vaksiny tanteraka ary nitombo ny mety ho vita vaksiny tanteraka arakaraka ny taona.
Ireo mpanao dia lavitra, voasokajy ho latsaky ny 35 taona, no tena nahatsapa fa nihoatra ny nantenainy ny diany.
Raha nanontaniana momba ny zavatra niainany izy ireo, dia saika ny rehetra (98%) namaly no nanome ny hatsaram-panahin'ny mpiasa sy ny mponina ao Hawaii ho "Tsara" na "Ambony salan'isa."
The Hawaii Tourism Authority (HTA) dia namoaka ny valin'ny fanadihadiana manokana farany nataony, izay nanadihady ireo mpitsidika avy any amin'ny Continental US izay nitsidika an'i Hawaii nanomboka ny 1 Oktobra ka hatramin'ny 5 Oktobra 2021, mba hamaritana ny traikefan'izy ireo amin'ny programa Safe Travels any Hawaii sy ny fahafaham-po amin'ny dia amin'ny ankapobeny. Ity no fanadihadian’ny mpitsidika fahaefatra sady farany tamin’ny andiany izay nanomboka tamin’ny faran’ny taona lasa.
Ny ankamaroan'ny mpitsidika (81%) dia nanome ny azy Hawaii dia toy ny "Excellent;" Ny fahafaham-pon'ny mpitsidika dia nijanona ho tsy miova nandritra ny taona niaraka tamin'ny fihenana kely tamin'ny fanadihadiana teo aloha natao tamin'ny Jona 2021. Rehefa nanontaniana ireo namaly izay nanome ny diany ho "Ambony salan'isa" na latsaka hoe inona no tokony hovana momba ny diany tany mba hanombanana ny diany ho "Tsara", ny mpitsidika dia nitanisa fameperana COVID vitsy kokoa (32%) narahin'ny fampiharana ny fitsipiky ny COVID (12%).
Amin'ireo mpitsidika miverimberina izay efa nandeha tany aloha ihany koa Hawaii tamin'ny Febroary 2020 na teo aloha, izay talohan'ny nampiharan'ny fanjakana ny fameperana COVID, 38 isan-jato no nilaza fa tsy dia nahafa-po ny diany ankehitriny. Ny antony voalohany nanononana an'izany dia ny fameperana COVID be loatra (65%) ary voafetra ny fahafaha-manao na ny fahafahan'ny trano fisakafoanana, ny toerana mahasarika ary ny trano fonenana. Na izany aza, ny 90 isan-jaton'ny mpitsidika dia nilaza fa afaka nanao ny rehetra na ny ankamaroan'ny hetsika nokasainy.
Nasehon’ilay fanadihadiana ihany koa fa ireo mpandeha lavitra kokoa, voasokajy ho latsaky ny 35 taona, no tena nahatsapa fa nihoatra ny nantenainy ny diany.
Raha nanontaniana momba ny zavatra niainany izy ireo dia saika ny rehetra (98%) namaly no nanome ny hatsaram-panahin'ny mpiasa sy ny mponina ho "Tsara" na "Ambony salan'isa." Ny ankamaroan'ny mpitsidika koa dia nanome ny hotely (na ny toeram-ponenany) ho tena tsara (82%).
Nandritra ny volana oktobra 2021, HawaiiNy fandaharan'asan'ny Safe Travels dia nahafahan'ny ankamaroan'ny mpandeha tonga avy any ivelan'ny fanjakana handalo ny fanagadrana tena mandritra ny 10 andro raha toa ka vita vaksiny tanteraka tany Etazonia izy ireo na nisy valin'ny fitsapana COVID-19 NAAT ratsy azo avy amin'ny mpiara-miasa azo itokisana. Ny ankamaroan'ny mpitsidika (81%) dia nilaza fa tsy nanana olana tamin'ny tranokalan'ny Safe Travels na ny fizotrany.
Talohan'ny nahatongavany tany Hawaii, saika ny mpitsidika rehetra (98%) no nahalala fa efa nisy ny baikon'ny governemanta, toy ny fanaovana saron-tava amin'ny toe-javatra sasany, ny fanalavirana ny fiaraha-monina, ary ny fisorohana ny fivoriam-be.
Ny ankamaroan'ny (70%) tamin'ireo namaly dia nilaza fa hitsidika an'i Hawaii indray izy ireo na inona na inona fepetra takiana mialohan'ny fitsidihana. Amin'ireo 30 isan-jaton'ny namaly, 18 isan-jato no nilaza fa hitsidika indray izy ireo rehefa tapitra ny areti-mifindra ary nesorina ny ankamaroan'ny baikon'ny COVID toy ny fandraharahana na fameperana manintona, 8 isan-jato no nilaza fa tsy manana drafitra hiverina any Hawaii izy ireo, ary 4 isan-jato no nilaza fa hitsidika indray izy ireo rehefa tsy misy fepetra takiana amin'ny fitiliana COVID.